Ukuhambelana kothando lweTaurus - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukuhambelana kothando lweTaurus
Ukuhambelana kothando lweTaurus
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoFebruwari 2
Abathandi beTaurus bacingelwa ukuba bahambelana kakhulu neScorpio kwaye ubuncinci buhambelana neeAries. Ukuba luphawu lomhlaba oluhambelana nomqondiso we-zodiac kukwaphenjelelwa bubudlelwane phakathi kwezinto ezine zodiac: Umlilo, uMhlaba, umoya kunye naManzi.
Abo bazalelwa eTaurus babonisa izinto ezithile xa benxibelelana nolunye uphawu lweempawu zodiodiac kunye nabo. Nganye yezi zinto zidityanisiweyo zibangela ukuxoxwa ngokwahlukeneyo.
Kule tekisi ilandelayo iya kuchaza ngokufutshane konke okuhambelana phakathi kweTaurus kunye neminye imiqondiso yeenkwenkwezi.
Ukuhambelana kweTaurus kunye neeAries
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lomhlaba luvelisa i-lava ke nina nobabini niqinisekile ukuba ngumdlalo ongaqhelekanga!
Ulwalamano lwakho kunokwenzeka ukuba lujolise ekuzuzeni izinto ezibonakalayo kwaye kuncinci kwimpilo yokomoya ke kukuwe kunye nento onomdla wokuba nayo ebomini.
Le miqondiso mibini yomhlaba ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! Banokungqina esona sibini siqinileyo, inkanuko kunye nokunyaniseka bakube befumene incasa ekwabelwana ngayo ngobuhle, inkcubeko kunye nezinto eziphathekayo.
Okanye banokuba sisiqhwithi sokuhamba nje ukuba i-egos yabo ingqubane kuba kolu lwalamano yindawo yomntu omnye obalaseleyo kwaye akukho namnye uzimisele ukunikezela.
Ukuhambelana kweTaurus kunye neGemini
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo ongenakwenzeka! UGemini uqhwithela ngaphakathi nangaphandle kobudlelwane eshiya iTaurus kungekho mpendulo.
I-Pragmatic and esengqiqweni iTaurus ifuna ukulawula kunye nokuyalela ukuba ubudlelwane babo buhamba njani ngelixa iGemini eguqukayo kwaye inamandla ayizimiselanga ukuthobela kwaye ikhetha ukuhlala kwimimandla ephuphayo.
Libra umfazi kunye ne-virgo umntu uthanda ukuhambelana
Ukuhambelana kweTaurus kunye neCancer
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo olula! Abanye bathi sesinye sezibini ezifanelekileyo njengoko kungekho mntu unokuthi yeyiphi enye yazo kodwa esinye isiphumo siqinisekile. Zombini ziyaphumelela ukuphuma kwezona zinto zibalulekileyo kwezinye zazo ezibalulekileyo.
Ngokujonga nje, iTaurus ibonelela ngesixa esichanekileyo sokuzinza, ubuntununtunu kunye nokulungelelanisa iimfuno zeCancer moody ngelixa iCancer izisa ubuchule kunye namandla kwesi sibini sithembekileyo nesithandayo esikonwabela ngokupheleleyo konke ubomi obuya kukunika.
Ukuhambelana kweTaurus kunye noLeo
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lomlilo ngumdlalo ongenakwenzeka! Olu dibaniso luhlala luyi-volcano ekulungele ukuqhuma kubangele ukuxhamla kumacala omabini. Zombini ziyonwabela ulonwabo olulula kodwa ezi zikwindlela eyahlukileyo.
Kananjalo, awunakuba neenkokheli ezimbini eziphikisanayo ngalo lonke ixesha ngezigqibo ezilula zasekhaya. Ukuba bayaphumelela ukuzinzisa xa ilixesha lokuba umntu ngamnye alalanise bakwindlela eqinisekileyo yokufumana inzuzo yezinto eziphathekayo.
Ukuhambelana kweTaurus kunye neVirgo
Le miqondiso mibini yomhlaba ngumdlalo olula! Ungabafumana phi abanye abantu ababini emhlabeni, bobabini basebenzela ukudala imvisiswano ebomini babo nakubomi babo babangqongileyo.
Zombini zixabisa uxolo, ukuthembeka kunye nokuthantamisa kwezona zimbo zomzimba zilula. Izinto zimiselwe ukuba zihambe ngokutyibilikayo, ngaphandle kokuba omnye wabo anqwenele ngasese ngaphezu kokuvumelana nje kunye novuyo lolu hlobo lwesibini apho izinto, nangona ziqaleke kakuhle, ziya kuphela ngesiquphe.
Ukuhambelana kweTaurus kunye neLibra
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo ongaqhelekanga! Zombini zizinzile kodwa uzolile uLibra akazukuyiqonda ngokupheleleyo iTaurus enamandla kunye nezinto ezibonakalayo.
Iinjongo zabo zahluke kakhulu kangangokuba kunzima kubo ukuba bafumane indawo efanayo xa kufikwa kwizicwangciso zexesha elizayo. ILibra ifuna ukuzinikela ngelixa iTaurus eneenkani iya kuthobela kuphela xa ejonga, kwaye xa lifikile elo xesha, iLibra kudala yahamba.
Ukuhambelana kweTaurus kunye ne Scorpio
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! Banokuba sesona sibini sinomdla kakhulu namhlanje kwaye baphikisane njengeentshaba ezinamandla ngolunye usuku.
Izichasi ziyatsala kodwa ezi zimbini zinokuthi zisilele kwisifundo apho zimodareyitha kwaye zivumelane. Bobabini banqwenela ngamandla kwaye akukho namnye oya kulungelelanisa.
Ukuhambelana kweTaurus kunye neSagittarius
Ukuhambelana kweTaurus kunye neCapricorn
Le miqondiso mibini yomhlaba iyinto eqinileyo! Isibini esingathathi xesha lokwenza ezona ndawo zinzulu. Banemibono efanayo, bayonwaba ngokufanayo ukonwabela iziyolo ezilula zobomi.
Ukuhambelana kweTaurus kunye neAquarius
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo ongenakwenzeka! Ngokwendalo bayatsala kwaye bayaphelelisana njengeethoni ezinobuchule zeAquarius kwiTaurus yomlilo kodwa ngamanye amaxesha izinto ziyaqhuma kwaye akukho nto umntu anokuyenza.
Ukuzola okukodwa kwe-Aquarius akuyi kuyiqonda ngokupheleleyo iTaurus enamandla kunye nezinto eziphathekayo. Iinjongo zabo zahluke kakhulu kangangokuba kunzima kubo ukuba bafumane indawo efanayo xa kufikwa kwizicwangciso zexesha elizayo. U-Aquarius ufuna ukuzinikela ngelixa iTaurus eneenkani iya kuthobela kuphela xa ejonga.
Ukuhambelana kweTaurus kunye nePisces
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo olula! Ngokumangalisayo iTaurus ibonakala ngathi iyayiqonda iPisces ifuna ukuba wedwa kunye nothando.
I-Pisces ikulungele ukuthobela izigqibo ze-Taurus zegunya ukuze zibekelwe ixesha elide ukuba ngamnye azi ixesha lokumisa kwaye aqonde ezinye zazo ezibalulekileyo.
Ngomhla we-18 ku-Epreli
Indlu yesi-7 kwi-Astrology: Zonke iintsingiselo kunye nefuthe
scorpio indoda libra mfazi ubuhlobo
Scorpio inyanga yamadoda ngothando
loluphi uphawu ngomhla wama-25
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoNovemba 26
Okthobha 2015 horoscope yomhlaza
indlela yokulukuhla i-capricorn
yintoni horoscope ngumatshi 19